लगानीको रूपमा Bitcoin गरेको उपयोगिता अध्ययन इन्डोनेसियाली सरकार
इन्डोनेसियाली सरकार लगानीको साधन रूपमा Bitcoin प्रयोग गर्नु विचार छ, व्यापार मंत्रालय गरेको फ्यूचर्स एक्सचेन्ज Supervisory बोर्ड (Bappebti) भने.
"Bitcoin प्रयोग भुक्तानी साधन निषेधित छ रूपमा, तर कसरी लगानीको साधन रूपमा प्रयोग? यो अनुमति छ वा छैन?"Bappebti टाउको Bachrul Chairi जकार्ता मा मंगलवार भने, रूपमा द्वारा kompas.com रिपोर्ट.
इन्डोनेसियाली व्यवस्था कुनै. 7/2011 मुद्रा अमेरिका मा रुपिया देश मा मात्र आधिकारिक कारोबार र भुक्तानी साधन छ.
Bachrul Bappebti लगानीको साधन रूपमा Bitcoin सम्भावित प्रयोग अध्ययन छ भने. "अध्ययन माध्यम, यदि हामी Bitcoin एक डिजिटल सम्पत्ति रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ," उसले भन्यो.
Bappebti मा बजार पर्यवेक्षण र विकास ब्यूरो टाउको Dharmayugo Hermansyah संगठन Bitcoin उत्पादन व्यापार ठूलो क्षमता देखे भने.
अलग, वित्त मन्त्री श्री Mulyani Indrawati देश मा कुनै नियम को cryptocurrency लगानी यसका नागरिक निषेधित बताए. "यो लगानीको साधन रूपमा Bitcoin प्रयोग गर्न मानिसहरूलाई छ,"त्यो जोड.
पहिलो Bitcoin माल सम्झौता रूस देखि टर्की गर्न गहुँ TRANSPORTS
Cryptocurrencies खाना वस्तु व्यापार मा टाउको उठाउन थालिसकेपछि गर्दै.
Bitcoin मा बसे पहिलो माल सम्झौता एक पोत टर्की गर्न शीर्ष SHIPPER रूस देखि गहुँ पूरा पछिल्लो महिना कार्यान्वयन थियो, प्रधानमन्त्री ढुवानी फाउंडेशन अनुसार, लेनदेन पछि उद्यम.
को माल थोक वस्तुहरु लागि प्रधानमन्त्री ढुवानी फाउंडेशनका blockchain भुक्तानी प्रणाली को पाइलट परीक्षण को भाग थियो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इवान Vikulov भने.
को लेजर आधारित डिजिटल प्रविधि मा र cryptocurrencies बाहिर भुक्तानी तत्काल प्रक्रिया र रूपान्तरण सक्षम हुनेछ, कम्पनी अनुसार, जिब्राल्टर आधारित इयत्ता पूंजी लिमिटेड बीचको साझेदारी. र जहाज दलाल Interchart LLC. समूह पनि यसको आफ्नै डिजिटल मुद्रा सिर्जना गर्न योजना छ.
रूस सबैभन्दा ठूलो बैंक को सीईओ: Cryptocurrencies छैन प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ
प्रभावशाली रूसी बैंकर हरमन Gref, Sberbank को टाउको, cryptocurrencies एक प्रतिबन्ध विरोध आफ्नो स्थिति reaffirmed छ.
रूसी अधिकारीहरु र वित्तीय अधिकारीहरु cryptocurrencies र blockchain प्रविधिको सहिष्णु हुनुपर्छ, रूसी समाचार एजेन्सी TASS बताउँदै रूपमा Sberbank सीईओ हरमन Gref उद्धरण. को बैंकर थप एक कदम भयो, cryptocurrencies अझै बुझेका गर्न र कुनै पनि नियम मापन र छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोर, reactionary छैन.
Gref भने “यसलाई [crypotocurrencies] छैन प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ, यो विकास मा एक महान नयाँ प्रविधि रूपमा, जो कुनै एक बुझ्न अझै छ।”
मध्य-2016 मा, बीच रूसी वित्त सेवाको गरेको (असफल) कि adopters Bitcoin criminalized एक Bitcoin प्रतिबन्ध बिल परिचय प्रयास, Gref खुल्लमखुल्ला Bitcoin एउटा सानो रकम होल्ड र बिल विरोध बताउनुभयो. त्यो बेला, रूस वित्त सेवाको सम्म जेलमा वाक्य प्रस्तावित7Bitcoin adopters लागि वर्ष.
Bitcoin स्वीकार गर्न ब्रिस्बेन हवाई अड्डा
ब्रिस्बेन हवाई अड्डा नै संसारको पहिलो डिजिटल मुद्रा अनुकूल विमानस्थल रूपमा ब्रांडेड छ.
को Aussie विमानस्थल रिटेलर र TravelbyBit एक नम्बर साथ सहयोगी छ. यात्री चाँडै TravelbyBit गरेको cryptocurrency भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ, जो Bitcoin र अन्य डिजिटल मुद्राहरू समावेश, दुवै टर्मिनलहरु भर विभिन्न पसलहरु भोजन र धेरै मा दोकान गर्न.
भागीदारी स्थानीय कारोबार समर्थन गर्न ब्रिस्बेन हवाई अड्डा उद्देश्य reinforces, यस यात्री अनुभव सुधार, र विमानस्थलमा डिजिटल नवीनता ठाउँ मा एक नेता बन्न.
लक्जरी होटल आवास गर्न विमानस्थल परिवहन देखि, ब्रिस्बेन गरेको Fortitude उपत्यकाका र खाना र मनोरंजन, ब्रिस्बेन भन्दा बढी 'गुप्त उपत्यका' रूपमा स्थानीय द्वारा rebranded गरिएको छ 20 क्षेत्र मा व्यापारीहरू अहिले डिजिटल मुद्रा भुक्तानी लिने.
कालेबले Yeoh, TravelbyBit सीईओ, जब तपाईँले विदेशी यात्रा तपाईं धेरै मुद्राहरू सामना गर्न र तपाईं कहिल्यै के विनिमय दरहरू बैंकहरू तपाईं चार्ज गर्दै थाहा भन्नुभयो ". यहाँ TravelbyBit मा हामी Bitcoin यात्रा आन्दोलन प्रचार गर्दै. विश्व-विस्तृत यात्रा को लागि डिजिटल मुद्रा. यसलाई सरल छ, सुरक्षित र त्यहाँ बैंक कुनै शुल्क छ,"श्री Yeoh भने.
Bitcoin सुरु गर्न स्टक व्यापार अनुप्रयोग Robinhood & Ethereum व्यापार
क्यालिफोर्निया मा ग्राहकहरु, मैसाचुसेट्स, मिसौरी, मनटाना र न्यू हैम्पशायर फेब्रुअरी सुरु अनुप्रयोगलाई मार्फत Bitcoin र ethereum व्यापार गर्न सक्षम हुनेछ, Robinhood बिहीबार घोषणा. त्यहि समयमा, सबै ग्राहकहरु अब मूल्यहरू ट्र्याक र लागि सतर्कता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 16 अनुप्रयोगमा cryptocurrencies.
Robinhood ग्राहकहरु को लागि एक तरिका रूपमा बारेमा छ वर्ष पहिले शुरू, ज्यादातर साना लगानीकर्ताले, मुक्त लागि आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत स्टक व्यापार गर्न. Robinhood पनि प्रिमियम भुक्तानी सेवा छ, र डिसेम्बर मा शुरू विकल्प व्यापार. कम्पनी अब भन्दा बढी छ3लाख प्रयोगकर्ता, संग 78 प्रतिशत तथाकथित सहस्र उमेर कोटी मा झर्ने 18 गर्न 35 वर्ष पूरानो.
cryptocurrency व्यापार को लागि, Robinhood कुनै लगानी minimums वा maximums हुनेछ, र कुनै निकासी सीमा. शीतभण्डार भनिन्छ के मा अफलाइन सुरु-अप डिजिटल सिक्का को सबै भन्दा पकड हुनेछ. व्यवहार को सिक्का चोरी देखि ह्याकरहरूलाई रोक्छ.
Robotrading वा मार्गदर्शन ट्रेडिंग
को cryptocurrency पु ...
Blockchain समाचार 17.07.2018
विशाल रेखा सन्देश ...
अघिल्लो पोस्ट:भुक्तानी अपरेटर धारी Bitcoin इन्कार
अर्को पोस्ट:एक सशस्त्र आक्रमण क्यानाडा गुप्त विनिमय मा प्रतिबद्ध थियो